War deg deg ah: Fashilintii Shirarka oo Halkeedii uu ka sii Wado Farmajo. - Muqdisho Online. Caasimada Muqdisho
HomeWararkaWar deg deg ah: Fashilintii Shirarka oo Halkeedii uu ka sii Wado...
War deg deg ah: Fashilintii Shirarka oo Halkeedii uu ka sii Wado Farmajo.
Waxaa muuqata in dowladdii xilkeedu dhammaaday ay mar waliba shacbiga ku marin habaabineyso been iyo xaalad abuur joogto ah. Waxaa maanta markale soo hadlay Dubbe oo aan waligii wax kheyr leh ku hadal ayaa haddana hadda Shacbiga Somaliyed ee sugayey in heshiis laga gaaro arrimaha doorashada uu diidan yahay Farmajo ayaa la soo shirtagay hadal Nabyo iyo Nacasanimo u muuqday. Waayo dowlada ku eedeyneysa xubin iyada ka mid ah inay wax ka socon waayeen sidii laba dal oo kale.
Waxaa muhiim ah in beesha Caalamka, dowladaha daneeya arrimaha Somaliya iyo Shacbiga Somaliyeed ay ogaadaan in hadda kadib wadahadal kasta oo Farmajo iyo Rooble lala galayaa uu noqodo mid saxaafadda ay goobjoog ka ahaato si loo ogaado cidda waxa diideysa iyo cidda wax dafireysa. Waana inay noqdaa ugu yaraan laba saxaafadda madaxa bannaan ah toosna loo daawan karo sidii doorashooyinkii dalka Soo maray.
Dowladaha ay dowladdaan ku jirtaa, dowlad federaal ahna ku tahay waa xubnaha dowlad goboleedyada oo ah tiirarka ay ku taagan tahay, haddaba MW xilka ka dhamaaday waxaa uu u yimid iyadoo gacmaha la is haysto oo wanaagga dalka laga wada shaqeynayo, hasa yeshee maanta waxaan Ilahay ka baryeynaa inuu intaan nooga tago oo uusan dalka sii kala goyn.
Durbaba wasaradda Arrimaha daibadda ayaa bilowday inay waraaqo u qorto ururrada Caalamiga sida UN/Golaha Amaanka, EU iyo Jaamacadda Carabta iyadoo la faray inay u sheegto:
In dowladdii Dhacday ee Farmajo ay qaban doonto Doorashadii qof iyo Cod ee ay Xalima Yarey Garwadeenka ka ahayd.
Si taas loo qabto waa in dowladda iyo Barlamaanka wada dhintay ee uu waqtiga ka dhammaday in ay ku wada darsadaan 2 sano.
In Farmajo uu ka shaqeeyo inuu fashiliyo shirka hadda socdaa iyo mid kasta oo la qabto isagoo marka caqabd laga gudbaa uu mid kale la yimaado.
In daadaal kasata lagu bixiyaa inaysan kala tagi karin kooxda u xareysan ee Qoorqoor, Guudlaawe, Lafta Gareen, Cumar Finish iyo Rooble oo xataa khasab loo adeegsado kii siku daya xelligaan inuu xaqa iyo shacbiga xaggooda u iisho.
Xogta hadda laga helayo shirka waxaa ka mid ah:
Madaxweyne Farmaajo oo ku adkeystay in Gedo loo dhiso maamul Goboleed oo aysan qeyb ka noqon doorashada Jubaland. Qodobkaan ayaa ahaa mid saaka uu soo kordhiyay madaxweynaha, kaddib markii Wasiirka Arrimaha Gudaha uu shalay la kulmay odayaal ka soo jeeda Gedo.
in amniga doorashada cidda qaadaneysa laga wadahadlo, waxaana Madaxweyne Farmaajo uu diiday inuu wareejiyo awoodda amni iyo maamul ee doorashada.
Maxadweynaha Puntland ayaa waxaa uu la idacadda VOA laanteeda Soomaliga waxaanu sheegay in been laga sheegay Puntland iyo Jubaland oo la sii daayey muuqaal horay loo diyaariyey Wareysiga halkaan ka dhageyso
Sidoo kale waxaa magaalada iyo braha bulshada Somaliyeed wareegaya muuqaal codeysan oo runtii si wanaagsan u cabairaya xaaladda iyo damaca Farmajo iyadana halkaan hoose ka daawo.
Farmaajo oo caawa qol isugu keenay 5 nin oo waalan, lacagna ku siiyay in ay caaytamaan
[Akhriso] Midowga Afrika oo si Kulul u Canbaareeyay Go’aankii muddo Kororsiga Farmaajo
[AU] Ma ogolaan doonno muddo kororsi. Xalka wuxuu ku jiraa WADAHADAL
Cabdifatax Ibrahim (Ronaldo)- April 22, 2021
Security analysts yesterday expressed outrage over the news of the deployment of 144 personnel of the Nigeria Police in Somalia under an African Union...
Somalia: Puntland crushes ‘terrorist networks’ behind assassinations
Maintaining their efficient and determined war on terror, Puntland security forces inflicted a heavy blow on Al-Shabaab in the latest operations launched following a...
Taiwan, Somaliland foreign ministers talk cooperation in videoconference
Taiwanese Foreign Minister Joseph Wu (吳釗燮) on Tuesday (April 20) held a videoconference with Somaliland acting Foreign Minister Liban Yousuf Osman. The Ministry of Foreign...
UNSC piles more pressure on Farmajo over illegal term extension
Amina Cali (Amina Sonna)- April 21, 2021
The United Nations Security Council has continued to pile pressure on the outgoing President Mohamed Abdullahi Farmajo over the recently approved term extension,...
Cabdifatax Ibrahim (Ronaldo)- April 21, 2021
Opposition leaders leave airport bolthole as they step up pressure over contested presidency of Mohamed Abdullahi Mohamed After months living at an upmarket inn close...
Farmaajo oo caawa qol isugu keenay 5 nin oo waalan, lacagna...
[Akhriso] Midowga Afrika oo si Kulul u Canbaareeyay Go’aankii muddo Kororsiga...